AMISOM oo ka arinsaneysa Xaaladda Amni ka hor doorashooyinka Dalka – Bandhiga
Madaxa Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Danjire Francisco Madeira, ayaa ballan-qaaday taageerada howlgalka; si baa lagu yiri loo hubiyo in doorashooyinka Baarlamanka iyo Madaxweynaha Soomaaliya ee 2020/2021 ay noqdaan kuwo sugan oo guuleysta.
Isagoo ka hadlayey kulan khadka tooska ah ay la yeesheen mas’uuliyiinta ajandaha guud ee bulshada Soomaaliyeed oo magacooda loo soo gaabiyo (SPA), iyo urur oo aan dawli ahayn, Danjire Madeira wuxuu sheegay in AMISOM ay tababar siisay ciidamada amniga Soomaaliya si ay u maareeyaan khataraha amniga doorashooyinka, ayna diyaar u yihiin inay taageeraan habka doorashada.
“Iyada oo qayb ka ah istiraatiijiyaddeenna, waxaan ku dadaaleynaa in aan dhisno hanaan lagu ilaalin karo amniga doorashooyinka 2020/2021, waxaanna loo baahan yahay in aan wax ka qabanno weerarada ay doonayaa in ay fuliyaan kooxaha kasoo horjeeda Dowladda” ayuu yiri Madeira.
Waxaan taageeri doonnaa Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, kuwa Darwiishta iyo hey’adaha kale ee amniga, ”ayuu yiri sii raaciyay hadalkiisa.
Sidoo kale kulanka ayaa lagu soo hadal qaaday qodobo ay ka mid yihiin doorashooyinka dhowaan ay ku hashiiyeen hogaanka Dalka iyo qaabka loo sugi karo amnigga Odoyaasha ama beesha caalamka ee kasoo qayb galaya Doorashooyinka.
Kulan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Gen. Diomede Ndegeya, oo ah Taliyaha Ciidamada AMISOM, Simon Mulongo, Kuxigeenka Madaxa AMISOM iyo Taiwo Babatunde, Madaxa Qeybta Arimaha Siyaasada ee AMISOM.
Dabayaaqadda Sanadkaan iyo Horaanta Sanadka 2021 ayaa loo madalsan yahay in Doorashooyinka Baarlamanka iyo midda Madaxweynaha ay dhacaan.
Sarkaal sare oo katirsan CIA oo lagu dilay Soomaaliya
Natiijooyinka laga filan karo shirkii Musharaxiinta uga socday Muqdisho
Xaliimo Aadan oo Diinta darteed uga hartay Fashion-ka